Sunaulo Nepal | मनोरंजन मनोरंजन – Sunaulo Nepal
काठमाडै । शुक्रवार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बिच फिल्म ‘सत्रुगते’को औपचारिक निर्माण घोषणा गरिएको हो । चर्चित हास्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको लगानीमा निर्माण हुने फिल्मलाई निर्देशक प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गर्नेछन् । भट्टराईले यसअघि सुपरहिट फिल्म ’जात्रा’ निर्देशन गरिसकेका छन् । हरिवंश आचार्यको कथा, दीपकराज गिरी र प्रदीप भट्टराईको पटकथा, हरिवंश आचार्य र... पुरा पढ्नुहोस ..
रेखा थापा र आर्यन सिग्देल स्टारर फिल्म रुद्रप्रियाको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । करिब साढे दुई मिनेट लामो प्रोमोमा एक्सन, लभ, रोमान्स र सेन्टिमेन्ट समावेश छ । ८ वर्षपछि एकसाथ स्क्रिन सेयर गरेका रेखा र आर्यन रुद्रप्रियामा मा कस्ता देखिएका छन् त ? ट्रेलर हेर्नुस् ः रेखा फिल्मस्मा निर्माण भएको रुद्रप्रियालाई सुदिप बबी भूपाल सिंहले निर्देशन गरेका हुन । फिल्ममा रेखा र आर्यनसँगै... पुरा पढ्नुहोस ..
काठमाडौं – चलचित्र ‘द मंगोलिनय हाट’ ६ असोजबाट प्रर्दशनमा आउँने भएको छ । निर्माण युनिटले आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना सहित चलचित्रको बिभिन्न पक्षबारे जानकारी दियो । आर.एल लामाको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा धिरन शाक्य आर.एल लामा, प्रतिक्षा खड्का, रोसनी ब्लोन, सुशिल पोखरेल, अजय खड्का, आकाश लामा, श्याम स्याङ्ताङ, लिला गिरी, माया लामा, बिजया तिखातरी लगायत कलाकारको... पुरा पढ्नुहोस ..
चलचित्र ‘टिनएज’ को अडियो जुकबक्स रिलिज गरिएको छ । बिहीबार डिजिटल राइट्स लिएको ओएसआर युट्युव च्यानलबाट अडियो जुकबक्स सार्वजनिक गरिएको हो । चलचित्रमा ५ वटा गीत समावेश गरिएको छ । कुनै स्याड भर्सन त कुनै रोमान्टिक गाना रहेको फिल्ममा टिएनजर्सको कथालाई मुख्य रुपमा उठान गरिएको छ । नृत्य निर्देशनमा क्रियाशिल दिनेश पाख्रीन निर्देशित यस फिल्ममा नयाँ कलाकारको बाहुल्यता रहेको छ... पुरा पढ्नुहोस ..
नायिका बन्दै संचारकर्मी ऋषी धमलाकी पत्नी / सत्यराजले गर्नेछन “अनुराग ” निर्देशन
सिनेमा ‘अनुराग’ घोषणा भएको छ । सत्यराज चौंलागाईले निर्देशन गर्ने सिनेमामा मोडल दीपक घिमिरे र एलिजा गौतमले डेब्यु गर्नेछन । एलिजा संचारकर्मी ऋषी धमलाकी पत्नी हुन् । राजधानीमा आयोजित ‘अनुराग’ घोषणा कार्यक्रममा ऋषी धमलाले दुई सन्तानकी आफ्नी पत्नीको सिनेमा खेल्ने चाहनालाई आफुले पुरा गरिदिएको बताउदै सबैलाई साथ/हौसला दिन आग्रह गरे । सत्यराजका लागि यो डेब्यु सिनेमा हो । यसअघि... पुरा पढ्नुहोस ..
‘पर्ख पर्ख…’ गीत रिलिज / यस्तो छ मंगलमको गित (भिडियो)
। असोज ११ गते रिलिज हुने सिनेमा ‘मंगलम’को पहिलो गीत सार्वज निक गरिएको छ । दीपक शर्माको शब्द/संगीतमा तयार भएको ‘पर्ख पर्ख…’ बोलको गीतमा कृष्ण काफ्ले र विन्दु परियारको स्वर छ । लोक लयमा तयार भएको गीतमा पुष्पल खड्का र शिल्पा पोखरेलले कम्मर मर्काएका छन् । निक्कै कोरस प्रयोग गरिएको गीतमा कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी छ । गीतलाई विष्णु ‘कल्पित’ घिमिरेले खिचेका हुन् । छविराज... पुरा पढ्नुहोस ..
बक्स अफिसमा अब्बल झरना थापाको ‘ए मेरो हजुर २’ / आक्रामक ब्यापार गर्दै
काठमाडौं । नेपाली कथानक चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ गत साता शुक्रबार साइत पारेर देशव्यापी हलहरुमा प्रदर्शनमा ल्याईएकोमा यसले राम्रो प्रशंसा पाउन सफल भएको छ । सुखद् कुरा के छ भने चलचित्र प्रदर्शनको पहिलो दिनको व्यापार कूल ७८ लाख ८ हजार ७१ रुपैयाँ ग्रस कलेक्शन गरेको छ । देशव्यापी रुपमा एकसाथ प्रदर्शनमा आएको यस चलचित्रले राजधानीका गोपीकृष्ण मुभिज, अष्टनारायण हलका चारवटै... पुरा पढ्नुहोस ..
सामाजिक संजालमा आलोचना गर्नेलाई नेपाल आईडलको यस्तो स्पष्टिकरण
एपि वान टेलिभिजनबाट प्रसारणा भैरहेको चर्चित रियालिटी शो ‘नेपाल आइडल’ पछिल्लो केहि समय देखी निकैनै विवादमा मुसिंदै गएको छ। नेपाल आइडलका जजहरुले गरेको केही बिवादस्पद निर्णय र भोटिङको कारणले गर्दा झानै विवादमा पर्दै गैरहेको हो। नियमानुसार शुक्रबार सम्पन्न भएको टप ४ बा​​ ट टप ३ मा प्रवेश गराउनुपर्ने थियो ।तर, त्यो हप्ता कोही पनि प्रतिस्पर्धिलाई आउट नगर्ने आयोजकले निर्णय... पुरा पढ्नुहोस ..
रणवीरको गालामा २४ थप्पड ! कुरा के हो ?
मुम्बई(एजेन्सी) । यस्तो लाग्छ कि फिल्म ‘पद्मावती’का कलाकारहरु सुटिङको समयमा आफ्नो दृश्यलाई उत्कृष्ट किसिमले क्यामरामा कैद गर्न चाहन्छन् । फिल्ममा अलाउद्दीन खिलजीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका रणवीर सिंह पनि आफ्नो भूमिकालाई निकै महत्वपूर्ण किसिमले किसिमले मेहनतका साथ निभाईरहेका छन् ।यो फिल्मको निर्देशन सञ्जय लीला भन्सालीले गरेका छन् । फिल्ममा रानी पद्मावतीको भूमिका... पुरा पढ्नुहोस ..